Burburinta iyo hoos u dhejinta jilicsanaanta, koox carruur ah oo yaryar ayaa daawaday muuqaal balaaran sida mishiin dab ka soo horjeeda hore ee gurigooda xanaanada cunugga. Nasiib wanaag, jawaabayaashu ma joogin xaalad deg-deg ah laakiin si gaar ah ayaa loogu baahanyahay in ay la kulmaan adeeg-bixiyayaasha Gobolka Grant ee galbeedka bartamaha Minnesota iyo in la qaybiyo diyaargarowga musiibooyinka "tags." Maalintii Hero Grant wuxuu ahaa mid ka mid ah mashaariic dhowr ah oo diyaargarawga xaaladaha deg-degga ah oo ay hormarisay Barnaamijka Early Childhood Initiative isbaheysi ku yaalo dhammaan galbeedka bartamaha Minnesota - kooxo Xarunta Dhexe ee Galbeedka (WCI) waxay gacan ka geysatay dhisida oo sii wadi doonta taageerada gobol kasta oo u adeegta: Becker, Clay, Douglas, Grant, Otter Tail, Pope, Stevens, Traverse iyo Wilkin.
Tani waa hal tusaale oo ku saabsan sida ay WCI u dhaqangaliso sida udub dhexaadka khayraadka leveraged iyo dadka, beelaha iyo gobollada gobolka. Hay'ad samafal ah iyo saldhigga bulshada ee beesha, WCI waa mid ka mid ah lix Meelood oo ah Minnesota Foundational Foundations oo ay aasaasay McKnight sannadkii 1986 si ay ugu adeegto Greater Minnesota. Hadafka 1aad ee WCI waa in la xoojiyo dhaqaalaha gobolka dhexe ee galbeedka Minnesota si qoysaskooda, bulshooyinkooda iyo ganacsigaba ay u koraan hadda iyo jiilalka soo socda. WCI waxay maaliyaddeeda, barnaamijyadeeda iyo khibradahooda ka dhigtaa meesha ay ku fiicanyihiin muddada dheer - sida maalgashiga ganacsiyada cusub iyada oo loo marayo barnaamijka amaahda iyo tababarka horumarinta shaqaalaha, hubinta kuweenna Caruurta yar yar waxay leeyihiin shabakad amaan ah taas oo ay ku faani karto, iyo ka caawinta bulshadu inay soo ururiyaan khayraadka ay u baahan yihiin si ay u noqdaan kuwo firfircoon, meelo caafimaad leh oo ay ku noolaadaan oo ay shaqeeyaan.
Maaddaama mid ka mid ah ururrada aan faa'iido doonka ahayn ee u adeega sagaal gobol oo ka tirsan Gobolka Horumarinta Dhaqaalaha ee Gobolka IV (EDR4), WCI ayaa xoojisay doorarka aan sida caadiga ah buuxinaynin hay'ad aan dowli ahayn. Waxaa qandaraas la gashay Maamulka Dhaqaalaha ee Dawladda Dhexe si uu ugu adeego Eegista Horumarinta Dhaqaalaha Degmada EDR4. Waxa kale oo ay qandaraas la gashay Waaxda Gaadiidka ee Minnesota si loo helo isku-duwidda qorshaynta gaadiidka gobolka.
Barnaamijka ugu dambeeyay ee WCI ee gobolka oo dhan waa kan Live Wide Open ololaha suuq-galka oo dadka ku dhiirri-galiya inay galaan bartamaha galbeedka Minnesota guryahooda.